AIRTOX-X-Han Kjøbenhavn Kabaha Shaqada Madow | airtox.com
AIRTOX-X-Han Kjøbenhavn kabaha badbaadada
Isku-dhafan isbeddel ah oo leh moodal iyo badbaado
Kuwa aadka u horumarsan Airtox-X-Han Kjøbenhavn kabaha badbaadada waxaa lagu gartaa dhowr ah super features, sida lakabka kacdoonka kahortagga gelitaanka: Whitelayer® - adag sida bir oo jilicsan sida dharka jikada. Iyadoo Whitelayer®, Airtox waxay abuurtay tikniyoolajiyad hoose oo dejisa Airtox-X-Han Kjøbenhavn kabaha badbaadada marka laga reebo kabaha kale ee amaanka ee suuqa aad laga yaabo inaad maanta ogaato.
Whitelayer® oo la socda Airtox Nidaamka AIR-3.0, wuxuu sameeyaa Airtox-X-Han Kjøbenhavn kabaha badbaadada oo u roon shahaado sida lagu yaqaanay kaliya xoogaa hindhisada.
Waxaa lagu heli karaa hal nooc midab: madow
Kuwa aadka u horumarsan Airtox-X-Han Kjøbenhavn kabaha badbaadada waxaa lagu gartaa dhowr ah super features, sida lakabka kacdoonka kahortagga gelitaanka: Whitelayer® - adag sida bir oo jilicsan sida dharka jikada. Iyadoo Whitelayer®, Airtox waxay abuurtay tikniyoolajiyad hoose oo dejisa Airtox-X-Han ...